Switzerland: Lamaane Muslim ah oo dhalasho loo diiday – Somali Integration Tv
(SITV- GENEVA):_ Lamaane Muslim ah ayaa loo diiyay dhalashada Swiss kadib markii ay diideen in ay gacanta ku salaamaan dad ajinabi ka ah xilli la weeydiinayay su’aalo, saraakiisha ayaa sidaasi sheegay.
Waxa ay go’aankaasi xaqiijiyeen jimcihii shalay ahaa.
Lamaanaha ayaa waxaa su’aalo ku saabsan muwaadinimada ay dalbadeen la weydiyay dhowr bilood ka hor, waxa ayna dhibaato ka mareen jawaabtii su’aalaha quseeya jismiga kala duwan.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii gabadh Muslimad ah oo reer Swidish ah ay shaqa ay dalbatay weysay kadib markii ay diiday in gacan qaaddo qof ajinabi ka ahaa balse markii dambe waxa ay heshay magdhaw.
Maamulada Swiss ayaa sheegaya in dadka doonaya in ay muwaadiniin ka noqdaan wadanka ay dhex galaan bulshada Swiss sidoo kalana xishmeeyaan sharciga waddanka.
Qoyskaan ayaa sheegay in aysan soo bandhigayn waxayaabaha iyaga qaaska u ah, kuwaasi oo ay warbaahinada maxaliga ah ay sheegeen in ay ka soo jeedaan waqooyiga Afrika.
Duqa magaalada Lausanne, Gregoire Junod ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in xorriyadda diinta ay ka mid tahay sharciyada waddanka balse ma ahan in dhaqamada diinta ay ka sarrayaan sharciga.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in lammaanaha aan lawaydiin wax ku saabsan diintooda, inkastoo ay u muqaatay mid aan sal lahayn, sida ay ku warrantay warbaahinta maxalliga ah.
Saraakiisha ayaa si adag uga hadlay in aan loo diidin wax la xiriira diintooda balse xushmad la’aantooda ku aaddan sinnaanta jinsiga.
Pierre-Antoine Hilbrand oo qayb ka ahaa guddiga waraysiga la yeeshay lammaanaha ayaa yidhi: “dastuurka iyo sinnaanta ragga iyo dumarka ayaa ka sarraysa mayal adayga indhaha la'”
Maahan markii ugu horraysay diidmada gacan qaadku ama salaanta in ay muran ka dhliso dalka Switzerland.
Sanadkii 2016-kii, ayaa Iskuul kuyaal dalka Switzerland laga eryay labo wiil oo Musliim ah ay diideen in ay gacan qaadaan macallimiinta oo dhan rag iyo dumarba.
Sheekadan ayaa dhalisay buuq keenay in qoyskaas laga joojiyo qaadashada dhalashada dalkaas.
Dalka dariska la ah Switzerland ee Faransiiska, ayaa haweeney u dhalatay dalka Algeria looga diiday muwaadinnmada dalkaasi kadib markii ay diiday in ay gacanta ku salaanto sarkaal intii lagu guda jiray xafladdeedii muwaadinnimada.
Machadkii Arrimaha Diblomaasiyadda Soomaaliya oo maanta la dhagax dhigay